Ogaden News Agency (ONA) – Riwaayadaha Dibadda loo Alifo ee Is-muuji Horta Waxay ku Dambeeyaan !
Riwaayadaha Dibadda loo Alifo ee Is-muuji Horta Waxay ku Dambeeyaan !
Posted by ONA Admin	/ July 8, 2017
Markasta ood maqasho koox isku tilmaantay inay ahaayeen ONLF ayaa shir halkaa ku qabsatay, waxaad ogaataa inuu halganka wadadii loogu talagalay weli ku taagan yahay xoog iyo awoodna uu halgamaaga JWXO leeyahay. Sababtoo ah haduuna halganka sidii loogu talagay uga soconin gude iyo dibadba oo gumaysiga aanu xanuun ku haynin halganka socda uma baahdeen inuu miisaaniyad ku bixiyo dacaayada halganka oo loo kireeyo teleefishino laga daawado dhowr qof oon raad ku lahayn halganka. Mufakiriinta Carabta ee wax faaleeya ayaa waxay isticmaalaan weedha ah – الغباء جند من جنود الله – oo macnahddeu yahay – Duqonimada waa jundi (askari) ka mid ah junuuda Ilaahay – waxayna adeegsadaan markay arkaan kuwii kasoo horjeeday oo dacayad dib ugusoo noqonaysa ku hadla ama gacantooda isku toogta markay fulinayaan fal ay islahaayeen ku dhibaateeya maslaxadda guud.
Inta aynaan sii faalaynin junuudan Ilaahay ee kolba uu JWXO ku taageerayo, aan yarehe qoraansano qoraaladii noo socday een kaga hadlaynay Riwaayadaha uu gumaysiga soo alifayo iyo kuwa u jilaya. Waxaana soo sheegnay in riwaayadahaa oo miisaaniyad badan ay kaga baxday gumaysiga uu muddo ka dib ogaaday in kuwii usoo xarooday ee loogu sheegayay inay yihiin motoorkii dhaqaajinayay jaaliyadaha Ogadenya ee riwaayadda wax ka jilayay, inay yihiin qaar u yimid Jigjiga iyo Adisababa say uga faai’daystaan tikidhada bilaashka ah oo soo doontay jaadka iyo khamriga sidoo kale bilaashka ah. Wuxuu ogaaday gumaysiga in kuwaasi aanay ahayn kuwuu doonayay ee xubnaha ka ahaa ururka ama ahaa taageerayaasha halganka ee dhabta ah. Waxaan soo sheegnay in Janan Abraha iyo Cabdi iley ay riwaayadihii loo dhigayay dawladda Itobiya ay kaga qaateen malaayiin doolar. In socdaaladii badnaa ee Cabdi iley dibadda loogu soo dirayay si loosoo afjaro taageerada jaaliyadaha markii la ogaaday kharashka ku baxay iyo waqtiga iyo juhdiga la galiyay ay ku dhamaatay guuldaro siday ku qiimeeyeen sirdoonka iyo warbixinadii ay soo direen safaaradaha Itobiya ee UK iyo Ameerika. Qiimayntaa ka dib waxaa la go’aamiyay in hab kale loo badalo riwaayadda oo dadka jilaya ay noqdaan qaar isa soo muujiya marka hore intaan la maalgalinin.
Hadaba riwaayadaha aan ugu magac darnay Is-muuji, waxaa loo soo xulaa siyaaba kala duwan jilayaasha wax ka matalaya oo intaba isugu biya-shubanaya inuu qofka sheeganaya inuu ahaa xubin ama masuul ONLF ee doonaya inoo soo xaroodo ama la maalgaliyo, uu isaga marka hore iska gado gumaysiga oo uu muujiyo wuxuu qaban karo haduu kusoo biiro ciidanka kasoo horjeeda halganka shacabka Ogadenya ee gobanimadoonka ah. Siday noo sheegeen ilo-wareedyo (sources) kala duwan oo ku sugan Jigjiga, qofkii dalbada inuu u shaqeeyo cadawga waa inuu Is-muujiyo horta. Tilmaamaha la siiyo qofka is-muujinayana waxaa ka mid ah;
Inuu marka hore si fiican uga dhex muuqdo jaaliyadaha iyo shirarka oo hadaliisa ay muujinayaan wadaniyadiisa, guubaabada xubnaha iyo cayda dabadhilifyada Jigjiga.
Inuu xubna badan ku kasbado hab saaxiibtinimo ama qaraabaysi iyo inuu la socdo kuwa xaladooda dhaqaale ay liidato.
Inuu badiyo dooda iyo muranka ku saabsan halganka isagoo marwalba ku daraya doodiisa .. hadii sidaa la yeeli lahaa iyo sidaa maa la yeelo.
Inuu si joogta ah ula socodsiiyo haya’adda uu kaga xidhan yahay sirdoonka ama safaaradda gumaysiga ee dalkaasi.
Inuu u hogaansamo fariimaha la siiyo oo uu fuliyo wixii laga dalbo waqtiga laga dalbaday.
Inahaas ayaa ugu muhiimsanaa siduu ii sheegay xubin ku xidhnaa kooxahaa oo si hoose uga mid noqday qaar la doonayay inay ismuujiyaan.
Marka uu noqdo shaqsiga isdhiibay mid u bisil hawsha oo la ogaaday inuu diyaar u yahay inuu wax ka jilo riwaayadaha gumaysiga ayaa waxaa loo tilmaamaa arimaha la doonayo inuu jilo iyo riwaayadda loo alifay. Waxaa ka mid ah riwaayadaha ay dhigaan ee sida fiican loo suuq geeyo midka loogu magacdaray Is-badal doon ee mudada haystay Facebook-yada intaan la daawanin dhamaadkii riwaayada ay u bixiyeen xubnaha inuu ahaa Is-dhiib doon. Inay arintu sidaa tahay uma baahna baadhitaan fog iyo xogaysi. Laba su’aal oo la weydiiyay kooxdaa ayaa si dhibyar u fashiliyay kooxdii isku magacawday is-badal doonka.
Waxaase ku lamaanan kooxdan lugahooda ku doonta gumaysiga inay u adeegaan ee la yidhi is-muujiya, qaar ka mid ah bulshada oo la afduubo eheladooda ka dibna lagu qasbo inay fuliyaan hawlaha loo xilsaaro oy ka mid tahay inay taageeraan kuwan jilaya riwaayadaha gumaysiga. Intaa ka dib;
Waxaan kor kusoo sheegnay in iskuday kasta oo gumaysiga uu soo abaabulo inuu ku jahawareeriyo bulshada ama ku dacaayadeeyo halganka uu guuldaro ku dhamaado taasoon ku tilmaanay inay ka mid tahay junuuda Ilaahay ee halganka xaqqa ah lagu taageero. Waxaan la soconaa in maamulka dabadhilifka ah ee Jigjiga uu ku xidho qofkii yidhaahda dagaal ayaa ka dhacay meel hebla ama sheega inuu soo arkay ciidanka ONLF oo jooga meel hebla. Kooxdan ugu dambaysay ee shaagtay inay bayaan soo saareen iyagoo leh waxaan nahay garab JWXO ka mid ahaa, waxay bulshada Ogadenya ee dibada ku nool u xaqiijiyeen inay been tahay sheegashadii kooxda Cabdi iley ay dadweynaha uga digeen in badana ay xabsiga ugu taxaabeen.
Waxaan la soconaa in dadweynaha gudaha digniin culus lagu siiyay in aan afkooda laga maqlin ciidan ONLF ah ayaan halkaa kusoo marnay ama dagaal kusoo qaaday meel hebla. Xataa waxaan ogsoonahay qorba joogta dalka booqda in la yidhaahdo dadka wareysta inay ONLF joogaan dalka gudihiisa. Dadweynaha oo digniintii hore qaba ogaana in dad badan loo xidhay way joogaan ama waxbaa ka jooga xataa, ayaa jawaabta ay siiyaan oo naftooda ay ku badbaadiyaan waxay ahayd; waa horaa noogu dambaysay nabad-diidkii. Duqonnimadii gumaysi kalkaalkii jilayay Riwaayadii ugu dambaysay ee Is-Muuji ayaa arintii beeniyey markay sheegeen inay Xabad Joojin ku dhawaaqeen. Uma malaynayo inuu qof caqli leh ku dhawaaqayo xabad joojin meel aan xabad ka soconin. Waxaana dhab ah in bayaanka ay sheegeen inay soo saareen oo dadweynaha u akhriyeen inuu ahaa bayaan inbadan uu gumaysiga iyo kuwa u adeega ay isha mariyeen kuna noq-noqdeen. Waa runtii oo feedhaha ka dilaacay, waa guul usoo hoyatay halganka xaqqa ah ee shacabka Somaliyeed ee Ogadenya iyo Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya. Maxaa ku xigi doona.